प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रविधि पुरस्कारबाट डा.पुनलाई पुरस्कृत गरिदै – Janapriyakhabar
प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रविधि पुरस्कारबाट डा.पुनलाई पुरस्कृत गरिदै
काठमाडौं । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक एवं सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रविधि पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारीको अवधिमा पनि मन्त्रालय नेतृत्व उनीप्रति अनुदार देखिरहेकै छ । अस्पतालमा पनि डा. पुनलाई महत्वपूर्ण भूमीका छैन ।